Indawo yabucala yokuhamba umgama wokuya kwizinto ezininzi
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguJim And Roxanne
Uya kuhlala kwindawo yabucala yonke ebandakanyayo enegumbi elinye lokulala, igumbi lokuhlambela eligcweleyo, ikhitshi eligcweleyo, indawo yokutyela kunye negumbi lokuhlala. I-suite isetyenziselwa iindwendwe ezibhalisiweyo ezi-2 kuphela.
Yonwabela bonke ubutofotofo bekhaya kubandakanya i-Wi-Fi encomekayo, iiTV ezimbini zescreen esicaba, enye ikwigumbi lokuhlala enye kwigumbi lokulala. I-Locast iya kukubonelela ngeetshaneli zasimahla zasekhaya, kunye ne-20 okanye ezinye iindlela. Ungangena kwakhona kwimirhumo yakho ngeRoku.
Nceda usebenzise iyadi yangasemva yabucala ngokunjalo.
Ndingathanda ukuqala ngokuthi igumbi lilungele iindwendwe ezi-2. Asizivumeli izilwanyana zasekhaya.
Uyakonwabela igadi yangasese kwaye imithi ngasemva ibonelela ngenqanaba elihle labucala. Ungonwabela iglasi yewayini okanye isiselo osithandayo uhleli kwitafile yepatio ngasemva kwendlu.
Thatha ithuba lekhitshi eligcweleyo kuquka izitya, iiglasi, izinto zokucheba neembiza neepani. Ikhitshi inezixhobo ezinobungakanani obugcweleyo, isitovu/ioveni, ifriji, imicrowave, itoaster, umenzi wekofu.
Kukho iindawo zokutyela ezininzi ezifikelelekayo kufutshane nendlu yethu kuquka nePanera ehlala idumile (umgama omfutshane wokuhamba), I-HOP, iChipotle, iWegmans, iBuffalo Wild Wings, kunye nabafana abaHlanu ukukhankanya abambalwa.
Ukuba unqwenela ukuthatha ithuba lekhitshi eligcweleyo i-Giant supermarket yindlela elula yokuhamba ngemizuzu emithathu ngayo nayiphi na iimfuno zakho zokutya.
Umbuki zindwendwe ngu- Jim And Roxanne
Ndifikeleleka lula ngexesha lokuhlala kwakho. Ndihlala kwikhaya elikufuphi kwaye ndinokufikelela ngokulula ngefowuni.
UJim And Roxanne yi-Superhost